The Imitation Game (2014) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားကိုအခုခတျေလူတှကွေညျ့ခှငျ့ရတာ တကယျ့ကိုထူးတဲ့ ကုသိုလျတဈခုလို့မှတျရပါမယျ။ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဇာတျကားထဲက အခကျြအလကျတှကေ တကယျ့ Top Secret တှဖွေဈပွီးဗွိတိနျနိုငျငံက ဒီအခကျြအလကျတှကေို နှဈ ၅၀ ခနျ့ထိမျးသိနျးလြှို့ဝှကျထားခဲ့တာပါ။
Perfect မဖွဈပမေယျ့ လူသားဆနျလှနျးတဲ့ လူတဈယောကျအကွောငျးကို ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးကောငျးကောငျး သရုပျဆောငျကောငျးကောငျးနဲ့တငျဆကျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကွညျ့ကိုကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။ ကွညျ့ဖို့တိုကျတှနျးအပျပါတယျ။
IMDb Rating(8.0/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (90%) ရရှိထားပါတယျ။မငျးသားကွီး Benedict Cumberbatch နဲ့ မငျးသမီး Keira Knightley တို့အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ဒီကားအပွီးမှာနိုငျငံအတှကျ ဘာတှေ ပေးဆပျပွီးပွီလဲ???
ဘာတှေ ပေးဆပျရဦးမလဲ??? ဆိုတာတှေးရငျးနဲ့“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” ဆိုတဲ့
ဒီဇာတ်ကားကိုအခုခေတ်လူတွေကြည့်ခွင့်ရတာ တကယ့်ကိုထူးတဲ့ ကုသိုလ်တစ်ခုလို့မှတ်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဇာတ်ကားထဲက အချက်အလက်တွေက တကယ့် Top Secret တွေဖြစ်ပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံက ဒီအချက်အလက်တွေကို နှစ် ၅၀ ခန့်ထိမ်းသိန်းလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တာပါ။
Perfect မဖြစ်ပေမယ့် လူသားဆန်လွန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းကောင်းကောင်း သရုပ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
IMDb Rating(8.0/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (90%) ရရှိထားပါတယ်။မင်းသားကြီး Benedict Cumberbatch နဲ့ မင်းသမီး Keira Knightley တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီကားအပြီးမှာနိုင်ငံအတွက် ဘာတွေ ပေးဆပ်ပြီးပြီလဲ???
ဘာတွေ ပေးဆပ်ရဦးမလဲ??? ဆိုတာတွေးရင်းနဲ့“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” ဆိုတဲ့